Online Shopping မှတ်ပုံတင်ဖို့ Website လိုအပ်ခဲ့ကြလျင်... | Online Service Center Myanmar -->
Online Shopping မှတ်ပုံတင်ဖို့ Website လိုအပ်ခဲ့ကြလျင်...
အစိုးရဘက်က Online Shopping သမားတွေကို မဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ဖို့လုပ်ရာမှာ Website နှင့်တကွမှတ်ပုံတင်ရမယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ချက်ထုတ်ပြန်လာတယ်၊ အဲ့ဒီလိုအချိန် အသိ OS သမားတွေ အပြင်မှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာရော၊ Message ကနေပါ လာလာငြီးပြကြပြီး Website လုပ်ရင် ဘယ်လောက်ကုန်မှာလဲ၊ ကုန်ကျစရိတ်က ဘယ်လောက်လောက်ထိရှိနိုင်လဲ လာလာပြီးမေးကြပါတယ်။
E-commerce Website တခုလုပ်ဖို့ဆိုရင် Startup မှာတင် အနည်းဆုံးအောက်ထစ်က သိန်းဂဏန်း၊ သိန်းဆယ်ဂဏန်း ကနေ ရာဂဏန်းအထိ ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါက Website ကို Startup စလုပ်တာမှာတင်ကုန်ကျတာပါ၊ Shopping Website ဖြစ်တာကြောင့် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ Data တွေထည့်သွင်းနေရမှာပါ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ၊ စာတွေကိုထည့်သွင်းနေရမှာဖြစ်လို့ Hosting ကြေးတွေက ကြာလေတက်လေ တက်လာမှာပါ။
1. Web Design ရေးဆွဲခ။
2. Hosting ကြေး။
3. Domain Name ကြေး။
4. လစဉ်၊ နှစ်စဉ် Website Maintenance Services ‌ကြေး။
5. အသင့်သုံး CMS တွေဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ကြေး ရှိပါတယ်။
6. Content တွေတင်ဖို့ ဝန်ထမ်း အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဆိုတာလည်းရှိပါမယ်။
ဒီလို အကြမ်းဖျဉ်းကုန်ကျနိုင်တာမျိုးလေးတွေပြောပြလိုက်ရင်တောင် ထိုင်ငိုချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ OS သမားတွေရှိကြတယ်၊ မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ရမှာပေါ့လေ ဈေးရောင်းလို့ရတာကတော့ Website အတွက်နဲ့တင် ကုန်ပါပြီဆိုပြီး ငြီးပြကြတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။
လုပ်လို့ရပါတယ် တန်ဖိုးနည်းဆိုတဲ့အတိုင်း တကယ်ကိုတန်ဖိုးနည်းပါတယ်။ ၁ နှစ်လုံးမှ မြန်မာငွေ ကျပ် ၂ သောင်းဝန်းကျင်လောက်ပဲ နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်ရှိမှာပါ။ ဒီတန်ဖိုးနည်း Website မျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ ချပြပေးတဲ့အတွက် အသိတွေထဲက Web Design သမားတွေ၊ Website ရေးဆွဲပြီး Service ပေးနေတဲ့သူတွေကတော့ ကြည့်မရဖြစ်ပြီး ဆဲချင်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဘယ်လို CMS မျိုးလည်းဆိုရင် Google က Free ပေးထားတဲ့ Blogger CMS နဲ့ပါ၊ Hosting ကတော့ Google ကပဲ Free ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
#E-commerce Website ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရပါ့မလား?
ရပါတယ် ကတယ့် Amazon, eBay, Shop. တို့လိုတော့ အကြီးကြီးလုပ်လို့မရပေမယ်မယ့် သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန် တန်ရုံကတော့ရပါတယ်။ ( နမူနာအနေနဲ့ ဒီမှာဝင်ကြည့်ပါ => www.shop-myanmar.blogspot.com ) အဓိက ကတော့ Templates လန်းလန်းသုံးထားပြီး Domain Name လေးတွဲပေးထားလိုက်ရင် အားလုံး OK မှ စိုပြေသွားပါပြီ။ အခု www.shop-myanmar.blogspot.com ဆိုရင် ဘာ Domain Name မှ မတွဲရသေးပဲ Google ကပေးတဲ့ Sub Domain လေးနဲ့ပဲရှိပါသေးတယ်၊ ဒီလို လေးပဲသုံးမယ်ဆိုရင် တပြား ၁ ကျပ်မှ ကုန်ကျစရိတ်မရှိတော့ပါဘူး၊ ၁ နှစ်ကို ၂ သောင်းဝန်းကျင် ကုန်ကျမယ်ဆိုတာက Domain ဝယ်ပြီးချိတ်မှကုန်တာပါ၊ မချိတ်ရင် တပြားမှမကုန်ပါဘူး။
Website ကို Hack လုပ်ခံရနိုင်လားဆိုတော့ အခြားသော CMS တွေလို 0Day ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ဒီ CMS ကိုသုံးထားရင် Hack လုပ်ခံရနိုင်ခြေနည်းပါတယ်၊ Google Mail Account တခုကို Security သေခြာလေးလုပ်ပြီးသုံးရင်ရပါပြီ။
လို CMS တွေမှာဆိုရင်တော့ 0Day ဆိုတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ CMS တွေမှာဆိုရင်လည်း Error ပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ စိတ်ညစ်နရတာများပါတယ်၊ ဒါဆို အဆင့်သုံး E-commerce တွေသုံးမယ်ဆိုရင်ရော ဆိုရင်...
လိုမျိုးတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Hosting တွေနဲ့ချိတ်သုံးရတာတွေနဲ့ Security ပိုင်းမှာ 0Day လိုမျိုးတွေနဲ့ ညားနေတတ်တာများပါတယ်။
နောက်ဆုံး Blogger CMS ကတော့ Google ဆာဗာကြီးဖြစ်လို့ တော်ရုံတန်ရုံကာလို့မရနိုင်တဲ့ ddos attack လိုမျိုးကိုတောင် အေးဆေးပဲဖြစ်စေမှာပါ။
ကဲ... တော်သေးပြီ အခုက ကြော်ငြာဝင်ပါပြီ၊ ဒီလို တန်ဖိုးနည်းတဲ့ Shopping Website ကို Google Sub Domain နဲ့ပဲ ယူမယ်ဆိုရင် တသက်လုံး Free ပါ၊ Domain ( နမူနာ - www.your shop name.com နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင် တော့ ၁ နှစ်စာကို ၂ သောင်းဝန်းကျင်ပဲကုန်ကျစေမှာပါ၊ OSC-Myanmar မှ Service team အနေနဲ့ အခုလိုပဲ အားလုံးအဆင်ပြေစေမယ့် တန်ဖိုးနည်း ဝန်ဆောင်မှုလေးတွေကို ရှာကြံပြီးပေးနေပါတယ်။
လာလာငြီးတတ်ကျတဲ့ OS သမားတွေလည်း ဒီ Post မြင်ပြီး ဝမ်းသာနိုင်ကြပါပြီ။
အခုတော့ www.shop-myanmar.blogspot.com လေးထဲဝင်ပြီး ဈေးစမ်းဝယ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Messenger ကနေ Hello လေးသာလုပ်လိုက်ပါ။
Website နမူနာ Video ကြည့်ရှုရန် -